Banyere anyị-QIANGSHENG MAGNETS CO., LTD
Ọkachasị onye nrụpụta magnet na Magenets Generator (PMGs maka eriri ikuku)
QIANGSHENG MAGNETS CO., LTD (QM)bụ ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu nke na - emepụta ma na - egosipụta ahịa magnet (NdFeB, Alnico, SmCo na mgbakọ magnet), Igwe Ọdụdọ Na ​​- adịgide (PMG) na sistemu igwe ikuku. Anyị nwere ndị nnọchi anya na United States, Australia, Italy, Uruguay, Nepal na mba ndị ọzọ.
Na anyị oru nka, anyị ọtụtụ atọ ndị yiri nkata nke na-adịgide adịgide magnet ihe, na anyị nkenke akụrụngwa &gha & nzukọ ike, anyị na-enye gị zuru magnetik ngwọta. Inwe ihe kariri 25 afọ ahụmịhe na-enye ngwaahịa ọhụụ na usoro imepụta ihe n'ụwa niile, anyị na-agba mbọ ịnapụta ndị ahịa ọrụ kachasị elu, enyemaka teknụzụ na uru bara gị.
Ndi otu ndi oru Injinia n’enye anyi ikike inye anyi uzo magnetik n’enweta ya ma gabiga ihe ichoro. Onye ọ bụla n’ime ndị injinia anyị nwere ahụmahụ bụ ọkachamara n’ichepụta na imepụta electromagnet na ihe ndọta magnet na-adịgide adịgide, mgbakọ na sistemụ. Ha maara nke ọma na nhọrọ na eva1uation nke ihe magnetik na akụrụngwa. Ha na-agba nkịtị na-arụ ọrụ na ndị ahịa na niile nkebi nke ha imewe, na-enyere gị aka họrọ ihe ngwọta na-kasị anya dakọtara na gị chọrọ, na-eri-irè n'uche.
Ka anyị teknuzu nka na ahụmịhe anyị na-ejikwa ihe niile ị chọrọ. Anyị na-ebupụ a dịgasị iche iche nke nha si anyị ụlọ ọrụ, Anyị nwere otu ìgwè ndị injinia na-agbazinye ha pụrụ iche nkà na oru imewe izute gị chọrọ nkọwa. N'omume dị na a na-eri, na mgbe edozi ya ma nyefee ya ngwa ngwa o kwere mee. Oge ntinye ihe eji eme ihe bu ihe na-erughi izu ato maka obere ihe nlele. Zitere anyị nkọwa gị taa, anyị ga-ezute ngwa imewe gị ngwa ngwa maka ngwaahịa dị ọnụ ala.